ကျွန်ုပ်တို့သည် မေရီကဲ့သို့ သခင်ခရစ်တော်နောက် လိုက်သင့်သည်။ | Radio Veritas Asia
ကျွန်ုပ်တို့သည် မေရီကဲ့သို့ သခင်ခရစ်တော်နောက် လိုက်သင့်သည်။
မေတ္တာပန်းတနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာဆိုရာတွင် ထောက်ရှုချက် အတိုချုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့်စစ်သည် ကပ်ရောဂါ‌ဆိုက်ရောက်နေချိန် ဘုရားရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုတို့ကို ထောက်ရှုခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများခံစားနေကြရသော သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးရင်း အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ "မာကဆာ (Makassar)"ကာသီဒြယ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် မနက်ပိုင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ကြရသူများအတွက် ‌ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ်ကို စတင်နေကြရပြီး၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ခြင်းအခြေအနေ၌ ဒုတိယအကြိမ် ဖြတ်သန်းကြရပေမည်။ မနှစ်က ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်စွာ ထိတ်လန့်ခဲ့ကြရပြီး ယခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြီးအကျယ် စမ်းသပ်ခံနေရပြီး စီးပွါးရေး အကြပ်အတည်းကလည်း ပြင်းထန်စွာ ကြီးထွားလာသည်" ဟူ ၍ ရဟန်းမင်းကြီးက မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ဤသို့ စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေကို ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ဘုရားရှင်သည် မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်နေသနည်း? ယေဇူးသည် ကားတိုင်ကို ထမ်းနေသည်၊၊ ယေဇူးသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ လိုက်ပါလာသည့် ကိုယ်ကာယ၏ မကောင်းမှုများ သာမက စိတ်ဝိညာဉ်၏ မကောင်းမှုများကို ထမ်းဆောင်နေသည်။ ထိုထက်မက ဝိညာဉ်ရေးရာ မကောင်းမှုများကို ထမ်းဆောင်နေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော မကောင်းမှုသည် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု နှင့် ခိုက်ရန်ဒေါသ ပဋ္ဌိပက္ခများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဒုက္ခအခက်အခဲများကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အသုံးချတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေရီသည် ကျွန်ုပ်တို့အား လမ်းပြပေးသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ တုံ့ပြန်ကြမည်နည်း? ယေဇူး၏ မယ်တော်ဖြစ်တော်မူသော ကညာစင်မေရီသည် ယေဇူး၏ ပထမဦးဆုံးသော နောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်ပြီး ကျွနုပ်တို့အားလမ်း‌ပြပေးကာ သခင်ယေဇူး၏ နောက်တော်သို့ လိုက်ခဲ့သည်။ "မေရီ" သည် သူမ၏ ဝေဒနာခံထမ်းခြင်း၊ ဘဝ၏ အခက်အခဲများနှင့် စိတ်ဆင်းရဲ့ခြင်းများကို ကိုယ်တိုင်ခံထမ်းလျက် ယုံကြည်ခြင်းဟူသော အလင်းမီးကို သူမ၏နှလုံးသား၌ ထွန်းလင်းလျက် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း လမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ဘုရာရှင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဤလမ်းခရီးလျှောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ကားတိုင်လမ်း၌ ဒုက္ခကြုံနေသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို တွေ့ရသည့်အခါ ကျော်ဖြတ်မသွားပဲ သူတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများသည် သနားကြင်နာခြင်းဖြင့် သူတို့နီးနားသို့ ရွေ့သွားစေရန် ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွန်အားပေးနေသည်။ သခင်ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ကို ခံထမ်းရန် စစ်သားများက အဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခံရသော "ဆိုင်မွန် စီရင်နီ" ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း " အဘယ့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်၌ ဖြစ်ရသနည်း?" ဟူသောမေးခွန်းမျိုးမေးနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းအချိန်၌ ထင်ရှားသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါပဲ ဘုရားရှင်ပေးသော ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်သည် သူ၏ထောက်ရှုချက်ကို ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သည့်အနေဖြင့် "မယ်တော်သည် ယုံကြည်ခြင်းလမ်းစဉ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့မှောက်တွင်အမြဲ လျှောက်လှမ်းသူဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီစောင်မတော်မူပါစေ။" ဟု မြွက်ကြားခဲ့သည်။
မယ်တော့်ဆုတောင်းမေတ္တာ ရွက်ဆိုခြင်းမတိုင်မီ ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်သည် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများခံစားနေကြရသော သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးရင်း အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ "မာကဆာ (Makassar)"ကာသီဒြယ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် မနက်ပိုင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ကြရသူများအတွက် ‌ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးခဲ့သည်။ ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းကြီးသည် တနင်္ဂနွေနေ့က ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရမှ ဘုရားကျောင်းအမှုတော်ဆောင်များအပါအဝင် ဘုရားရှိခိုးသူ ဘာသာတူများလည်း ဒဏ်ရာများစွာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းပေးပို့သူထံမှ သိရှိခဲ့ရသည်။